Fampandrosoana :: Hanao asa an-tsitrapo eto Madagasikara ireo Malagasy mpila ravinahitra • AoRaha
Fampandrosoana Hanao asa an-tsitrapo eto Madagasikara ireo Malagasy mpila ravinahitra
Hanampy ireo Malagasy mpiray tanindrazana aminy ireo monina any ivelany na ny “diaspora”. Hisy mpilatsaka an-tsitrapo dimy ambin’ny folo avy any amin’ny firenena dimy, dia Frantsa, Etazonia; Canada, Suisse ary Benelux (Belzika – Nederland – Luxembourg ) hisehatra amin’ny lafiny sosialy any amin’ny kaominina ambanivohitr’i Manjakandriana. Ao anatin’ny fandaharanasa “Loharano”, izay kara- karain’ny minisiteran’ny Raharahambahiny no hanatanterahana izany.
“Tanjona ny hampandraisana anjara ny tanora “diaspora” malagasy amin’ny asa mba hitondra fampandrosoana ifotony miaraka amin’ireo kaominina iasana. Ankoatra izay ihany koa ny fanomezana sehatra azy ireo amin’ny fampahafantarana ny talentany sy ny hisian’ny fifandraisana amin’ ny samy mpila ravinahitra”, hoy Rahajarizafy Lanto, talen’ny “diaspora” eo anivon’ny minisiteran’ny Raharahambahiny malagasy, nandritra ny fampaha- fantarana ny andiany voalohany amin’ity tetikasa ity, omaly.
Telo volana no fotoana hijanonan’ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo eto amintsika. Any amin’ny kaominina Manjakandriana, Sambaina, Carion, Mantasoa ary Talata Volonondry izy ireo no hiasa ka hanome fahalalana ireo mponina any amin’ ny fampianarana kajimirindra,fiompiana sy asa tanana, teny vahiny. Ny volana jolay ho avy izao izy ireo no hanomboka ary hifarana telo volanany ftoana hanaovany asa
an-tsitrapo. Misokatra kokoa ho an’ireo tanora malagasy mbola tsy teto Madagasikara mihitsy ny “Loharano” mba hahafahan’izy ireo mahafantatra bebe kokoa momba ny tanindrazany.
Fizaham-pahasalamana :: Miveri-maina matetika ireo marary mila fitarafana eny amin’ny HJRA